Mandroso, mihemotra ! | NewsMada
Mandroso, mihemotra !
Par Taratra sur 06/02/2018
Mihazakazaka, tsy misy toy izany ny taona 2018. Tsy hitahita akory, efa miditra amin’ny volana faharoa sahady. Mirimorimo toy izany koa ny fiainan-dRamalagasy. Miridana tsy tana ny vidim-piainana, mihodinkodina tsy fantatra hoe : hanao inona ny lalan-kalehan’ny vahoaka. Mandroso, mihemotra ny firenena. Mandroso any amin’ny tsy fantatra ary mihemotra ho an’ny fahaverezana.
Mihozohozo ny tongotra, mangovitra ny tanana. Tsy hita izay hijoroana sy hosarangotina. Miantso vonjy ny rehetra, saingy kely feo ka tsy misy mandre manoloana ity fandrosoana mihemotra ity. Mikiakiaka ny vehivavy, mitomany ny kilonga fa tsy misy mpitsetra sy mpanontany.
Dia samy manao izay handrosoany amin’izay saim-pantany eo daholo. Ao ireo mihemotra noho ny tsy fisian’ny fanantenana intsony, miandry izay hidonany. Dia mandroso, mihemotra eo avokoa ny ambanilanitra iray manontolo.
Fa misy kosa ireo mandroso be noho ny fihemoran’ny sasany. Zarany aza misy mihemotra hisondrotany. Toy ny fiara mandeha amin’ny lalan-dratsy io. Tavela eo izay rovitra kodiarana, sy ratsy motera. Toy izany koa ny vahoaka malagasy. Mihemotra, noho ny lalan-dratsy inian’ny mpitondra atao. Mitorina vokatry ny ankason’ny mpitantana. Tsy zakan’ny vovok’aina intsony, hany ka mandroso any amin’ny fihemorana ny ankamaroany.
Ao kosa ireo matanjaka, tsy mikosi-maso ary tsy miferinaina amin’izany na indray mipi-maso aza. Tompon’ny vola sy fahefana ka na ratsy ny lalana, na mideza sy mikiotaontaona aza, tsy maintsy mandroso ary tafita ny tanjona. Mandroso harena sy mitombo laza amin’ny fanambakana hihemoran’ny tsimandadiharona mivesatra ny tsy rariny.
Mandroso fandrosoana ny lehibe, fa mihemotra fandrosoana ny madinika. Izany ny fiainana iainana ety. Dia samia àry mandroso, mihemotra eo, iaraha-mitazana e.